Ny Landscape Marketing Digital | Martech Zone
Talata, Janoary 8, 2019 Alatsinainy Janoary 7, 2019 Douglas Karr
Mihamanakaiky ny 2019 ary ny fivoarana miandalana eo amin'ny tontolon'ny dokam-barotra dia manohy manova ny fomba fanaovana dokam-barotra nomerika. Izahay dia efa nijery fironana nomerika vaovao, saingy araka ny statistika, latsaky ny 20% amin'ireo orinasa no nampihatra fironana vaovao amin'ny paikadim-pirenenan'izy ireo amin'ny nomerika amin'ny taona 2018. Ity tranga ity dia miteraka resabe: mijery ireo fironana vaovao manantena ny hanao onja ao amin'ny taona ho avy, fa mazàna, mifikira amin'ny làlana taloha.
2019 no mety ho taona hitondra ireo fahazarana dokambarotra nomerika vaovao. Izay niasa tamin'ny nomerika tamin'ny taon-dasa dia mety tsy mandeha amin'ity taona ity. Ho an'ireo izay te-hahazo ny topy topimaso momba ny fironana, ny ekipan'ny Epom Market dia nisitrika lalina tamin'ny fifanakalozana dokambarotra nomerika ary nahazo ny topy feno momba ireo fironana izay ho vavolombelona amin'ny taona 2019.
Fandraisana fitadiavana ho an'ny dokam-barotra:
Raha mbola tsy navily ny teti-bolanao tamin'ny fividianana haino aman-jery programa ianao, dia ny 2019 no fotoana farany hanaovanao izany.
Ireo izay tsy mividy fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana dia hanary vola hatrany nefa mandoa vola amin'ny fiheverana sy ny fiovam-po.
Ny tsena dizitaly dia miroso mankany amin'ny mangarahara sy fanatsarana tanteraka (jereo fotsiny ny fiovan'ny DSP nandritra ny taona lasa).
Ny dokam-barotra amin'ny horonan-tsary dia nijanona tsy endrika endrika doka premium - androany dia endrika doka tokony hampiasaina handrisihana ny fifampiraharahana faran'izay betsaka sy hanaterana ny hafatrao amin'ny mpihaino marobe.
Mahazo ampahany bebe kokoa amin'ny pie nomerika ny finday, noho izany ny efijery finday dia hijanona ho fomba mahomby indrindra hamelezana ny mpihaino kendrenao.
Tags: 2019mandany dokatontolon'ny dokam-barotraLandscape Advertising DigitalSary torohaydokam-barotra findayfandaharan'asadolara doka video